Hiran State - News: HS:-Wararkii ugu danbeeyey iyo magaalada Bulo Burde
HS:-Wararkii ugu danbeeyey iyo magaalada Bulo Burde
HS:-Wararkii ugu danbeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Bulo Burde caawa ayaa sheegaya in kooxda Shabaab ay siweyn ugu kala aragti duwan yahiin qaabka loo galayo dagaal saf balaran ah oo ay sida ay sheegeen ku doonayaan iney ku difaacaan magaalada Bulo Burde dibna ugu qabsadaan magaalada Belet Weyne.
Muran xoogan iyo kala aragti duwanaan ayaa waxey ka taagan tahay arintaas kadib markii hogamiyaasha qaarkood oo sida laga dareemayo magaca Shabaab doonaya iney u isticmaalaan danaha beelahooda sida hogaamiyaal aanu ka xusi karno.
Ali Dheere,Hasan Dahir Aweys Xussen Ali Fiidow iyo saraakiil u badan Xizbul Islaamkii bur buray hadana ku biirey Shabaab,waxey soo jeediyeen in Hiiraan laga soo weeraro labo jiho. dhinaca Bulo Burde ciidamo u badan kuwa ka amar qaata hogaamiyaashaas aanu kor ku soo sheegnay lagana keenay ceelasha Biyaha Afgooye iyo Dayniile iney gudaha magaalada Bulo Burde ku dagaalamaan si ay magaalada u bur burto.
Sidoo kale Oday Hasan Daahir Aweys ayaa soo jeediyey dhinaca waqooyi ee magaalada Belet Wyene iney diyaar ku yahiin ciidamo u badan beeshiisa oo wata magaca Ahalusuna iyagoo sida ay sheegeen Aden Abdi Ciise (Garaaso) oo dhawaantan soo gaaraya Hiiraan uu garab kusiin doono ciidamo hada ku sugan Guriceel oo uu hogaaminayo nin ay ku sheegeen Xeefoow oo ah gudoomiyaha gudiga fulinta Ahalusuna goboalda dhexe, ninkaasi oo ay ilmo adeer yahiin Hasan Daahir Aweys.
Laakinse sarakiil kale oo Shabaab ka tirsan waxey qabaan in shacabka la kasbado oo laga raadiyo taageero iyagoo quul dareeyey dagaal laga qarinayo qaabka loo gaalayo saraakiisha Shabaab ee degaan ahaan ka soo jeeda Hiiraan in aan guul lagu gaari karin ayna arintaasi xarakatu ku fashilmi doonto.
Si kastaba markii laga war heley dhaqdhaqaaqa ay wadaan hogaamiyaashaan aanu magacyadooda kor ku xusnay ayaa waxaa la qorsheeyey in loogu tago Bulo Burde kuwa wata magaca Ahalusunana laga soo reebo shaqiyaadka reer Hiiraanka ah kedibna kooxda Ahalusuna Galgaduud oo uu hogaaminayo Xeefoow loola dagaalamo qaab qabiil.
Sikastaba shacabka Hiiraan ayaa hada siweyn ula socda hagardaamada ay markasta qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ku hayaan iyagoo huwan magacyo diin.ma ahan markii ugu horeysay ee Hiiraan leysku dayo in lagu qabsado magacyo diin horey ayaa waxaa sidan oo kale ugu qabsaday ururkii uu hogaaminayey Hasan Daahir Aweys ee Xizbul Islaam iyadoona magaalada Belet Weyne si arxan daro ah xiligaasi loogu garacay Hoobiye lana gubay baqaarada ugu waaweyn magaalada Belet Weyne iyadoo ay kooxdu markaasi isticmaaleysay shaqsiyaad reer Hiiraan ah oo ay qaldeen.
Ugu danbeyn waxaa leysla gartay hadii lagu guuleysan waayo qorshahan in la diyaariyo qaraxii Jun,18/2009kii lagu dilay wasiirkaii Amniga iyo dad kor u dhaafaya 100 ruux oo kale iyadoo lala eeganayo goobaha lagu shiri doono.
Isku soo duuboo reer Hiiraan markaan iyagoo soo jeeda ayaa la qabsan doonaa shaqsi danbe oo reer Hiiraan ah oo loo adeegsan doono bur burinta magaalooyinka waaweyn ee Hiiraana ma jiri doono ayuu yiri sargaal caawa naga codsaday in aanu maagciisa xusin oo ku sugan Hiiraan.
Magaalada Bulo Burde ayaa laga yaabaa isla rag kooxda Shabaab ka tirsan oo ka soo jeeda deegaanka in ay dagaal ka bilaabaan gudaha magaalada Bulo Burde ka hor inta aysan gaarin xoogaga Hiiraan oo ku sii siqayo magaalada.
· admin on January 05 2012 23:39:45 · 0 Comments · 1437 Reads ·
14,568,759 unique visits